Usoro ojiji -
Jiri ozi enyere anyị
Ebumnobi nke ibu
Imelitere ikpeazụ: 14 Mar 2019
Ojiji nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ bụ isiokwu iji kwenye na ọnọdụ na ọnọdụ dị n'okpuru. Biko gụọ ọnọdụ na ọnọdụ ndị a n'okpuru nlezianya tupu ịnakwere. Site na ịpị bọtịnụ nnata, ị na-ekwenye na ị ga-agbatị ma na-aghọ otu nkwekọrịta a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na nke ọ bụla n'ime usoro na ọnọdụ dị n'okpuru, jiri obiọma ghara iji ma ọ bụ nweta ngwa ụlọ ọrụ.
Usoro na ọnọdụ maka CompanyHub Application
Ụlọ ọrụ CompanyHub, bụ Software dịka Ntọala Ọrụ (SaaS) nke a na-ejide na Ụlọọrụ CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd. (nke a kpọtụrụ aha dị ka CompanyHub, Anyị ma ọ bụ Anyị), otu ụlọ ọrụ nke aha ya bụ 1956 na ụlọ ọrụ ya dị na Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, India - 422101. Site na ịnweta na iji Ụlọ ọrụ CompanyHub maka nchịkwa ahịa na ọrụ nlekọta ahịa (ọrụ "niile"), gị, onye ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke a na-enye ikikere ikikere iji ngwa CompanyHub (nke a kpọtụrụla "gị" ma ọ bụ "gị "), Na-ekwenye na ọ ga-agbatị gị site na usoro na ọnọdụ ndị a, yana ntụziaka ọ bụla, iwu na okwu ndị ọzọ e zoro aka na ya (n'ozuzu ya," Usoro ") na iji ya ma ọ bụ ohere ahụ ga-abụ nkwekọrịta n'etiti gị na CompanyHub.
Mgbe ị kwadoro usoro ndị a na ọnọdụ maka ịkwụ ụgwọ nke nkwekọrịta ahụ kwetara, CompanyHub kwetara inye gị ikikere nke a na-enweghị ike ịkwụsị, nke a na-enweghị ike ịkwụsị, nke a na-enweghị ike ịnyefe iji jiri Ụlọ ọrụ CompanyHub, wụnye nkwụnye ihe nchọgharị ma kwenye ọzọ iji nye Ọrụ ndị edepụtara n'ime ebe a.
Ị kwenyere ma ghọta na anyị nwere ike ịgbanwe oge ndị a, ụfọdụ atụmatụ nke Ụlọ ọrụ Company na / ma ọ bụ ụfọdụ atụmatụ nke Ọrụ ahụ, na-enweghị ọkwa na usoro niile gbanwere na mgbanwe ga-adị irè mgbe ị kwusara ozi ngosi. Naanị gị ga-ahụ maka ịlele Usoro a ma gbanwee nkwupụta ọkwa kwa oge maka nyochaa. Ihe ojiji nke Ụlọ ọrụ CompanyHub mgbe e debanyere ederede ndị ahụ, na-egosi nkwenye gị na mgbanwe ndị a.
CompanyHub nwere ike nyochaa ma gbanwee ụfọdụ atụmatụ nke Ọrụ ya kwa ụbọchị (1) soro iwu, iwu ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ dị mkpa; (2) iji rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụ chebe onwe ya na ndị ọrụ ya. CompanyHub nwere ikike ịgbanwe, jụ ma ọ bụ kpochapụ ihe ọ bụla dị na ya ma ọ bụ bufee ya na sava ya ka ya, na ya naanị uche, kwenyere na-adịghị anakwere ma ọ bụ imebi iwu ma ọ bụ Okwu ndị a.
Site na ngwa CompanyHub anyị nyere gị aka n'ịchịkọ data niile ị na-ere na otu ebe, mee nyocha na ịmepụta akụkọ iji nyere gị aka ịme mkpebi ego dị mma. Mgbe ịdebanye aha na nyochaa akaụntụ Google gị, ngwa ọrụ CompanyHub ga-ewepu mkparịta ụka email gị maka 6 ikpeazụ (Ọnwa isii) site na ụbọchị ịdebanye aha. The CompanyHub ngwa ahụ ga-ahụ na-akpaghị aka na ọdịnaya nke ozi ịntanetị na ga-edepụta ndepụta nke ọtụtụ ndị kọntaktị dị mkpa. A na-ekwuputa ya na ndepụta a bụ nanị egosi na ọ bụghị ike ọgwụgwụ. Maka ịrụ ọrụ nke Ụlọ ọrụ CompanyHub, Ị ga-agbakwunye ndekọ nke kọntaktị gị, ụlọ ọrụ na azụmahịa ndị metụtara ụlọ ọrụ ndị a.
Ewezuga njikwa ahia site na ngwa CompanyHub, CompanyHub ga-enyekwa ọrụ ndị a
Nchọgharị Nchọgharị Google Chrome maka ihe ndekọ email na-enye aka ma nye akụkọ banyere ihe ndị dị otú ahụ
Njikwa iji hazie njikwa data na iji nọgide na-elekọta
Na-atụ aro na-agbaso ọkụ na kọntaktị dị ugbu a
Ihe ncheta ma ọ bụrụ na kọntaktị anaghị aza email na maka ọrụ kwa ụbọchị na ntinye na wdg
Imelite na ngwa CompanyHub
Enwere ike ịdekọ mkparịta ụka ekwentị niile n'etiti gị na anyị gbasara Ọrụ ahụ maka ebumnuche anyị dị n'ime ụlọ ma ugbu a ị kwadoro nlekota na nyocha ahụ.
Usoro nhazi anyị na-eduzi site na online reseller Paddle.com. Paddle.com bụ Onye ahịa nke Dekọọ maka iwu anyị niile. Paddle na-enye niile ahịa ahịa jụrụ ajụjụ na aka na-alaghachi.
A machibidoro gị iwu na ị gaghị:
Tinye aka na ntinye data, ichuchapu, ịgba, ma ọ bụ iji usoro ma ọ bụ usoro na-eziga ajụjụ na-akpaghị aka na ngwa CompanyHub.
Gbanwee, megharia, sụgharịa, ma ọ bụ megharịa engineer ọ bụla òkè nke CompanyHub ngwa ma ọ bụ Ọrụ.
Jiri robot, ududo, ngwa nyocha / weghachite saịtị, ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ iji weghachite ma ọ bụ depụta akụkụ ọ bụla nke Ụlọ ọrụ CompanyHub ma ọ bụ Ọrụ.
Gbanwee ma ọ bụ etiti akụkụ ọ bụla nke ibe weebụ ndị dị na ngwa CompanyHub ma ọ bụ Ọrụ.
Jiri weebụsaịtị ma ọ bụ Ọrụ ahụ, ma ọ bụ n'amaghị ama, iji mebie obodo, obodo, mba ma ọ bụ mba ụwa.
Na-ebunye ọ bụla nje, ikpuru, ntụpọ, ịnyịnya Trojan ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ebibi ihe.
E wezụga mgbochi ndị dị n'elu, ị ga-ahụ na:
Ụlọ ọrụ CompanyHub na-eji ya maka nsụgharị ahịa nke ụlọ gị ma ọ bụ nzukọ gị
Ịnweta ụlọ ọrụ CompanyHub ga-enye naanị ndị ọrụ gị, ndị nnọchiteanya ma ọ bụ ndị ọrụ nkwekọrịta gị
Ịgaghị enye, ma ọ bụ mee ka Ụlọọrụ CompanyHyị nweta ụdị ọ bụla (gụnyere site na ịkekọrịta nzere nbanye na ngwa CompanyHub), n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akụkụ (gụnyere ma ọ bụghị nanị na ịkekọrịta koodu ihe ma ọ bụ koodu iyi) na onye ọ bụla ma enweghi nkwenye edere tupu anyi edee
Enweghị ihe ọ bụla dị n'ime a ga-ewere ya dị ka inye ikike ọ bụla n'okpuru ikike ikike ikike ọgụgụ isi nyere anyị ma ọ bụ ikike ọ bụla iji ngwa CompanyHub ma ọ bụ ọrụ ọ bụla nke ọrụ anyị karịa nke a akọwapụtara kpọmkwem.
Aha ụlọ ọrụ na logos na ngwaahịa niile na aha ọrụ, akara ngosi na nchịkọta okwu bụ ụghalaahịa na akara ọrụ ndị ụlọọrụ CompanyHub na-eji na ụlọọrụ CompanyHub. Ụlọ ọrụ CompanyHub, koodu ntinye, ụdị aghụghọ na ejiji maka ọrụ nke ọrụ bụ ikikere nye CompanyHub.
Ndị ọzọ karịa ikikere ejiri iji ngwa CompanyHub dị ka ekwuputara na ebe a, ikike niile, aha na mmasị na ikike niile nke ikike ọgụgụ isi, gụnyere mana enweghị njedebe ọ bụla ikike nwebisiinka, ụghalaahia na isi data, nke etinyekwara na Ọrụ, gụnyere ọdịnaya ya na nhọrọ na ndokwa ya, ga-anọgide na anyị na mgbe niile. Enweghị ihe dị na Usoro na Ọnọdụ na / ma ọ bụ Nkwekọrịta ahụ bu n'obi ịfefe ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke ikike ndị dị otú ahụ.
Ewezuga ikikere iji ngwa CompanyHub, dị ka enyere ya aka n'okpuru Usoro ndị a, a gaghị enye gị ikikere ọ bụla ikike nwebisiinka, ụghalaahia, ikike ikike ikike ọzọ nwere ikike na ngwa CompanyHub ma ọ bụ ọrụ, usoro ma ọ bụ nkà na ụzụ kọwara n'ime ya. Enwere ikike niile dị n'aka ụlọ ọrụ CompanyHub.
Ikike niile, aha na mmasị gụnyere ụghalaahia na nwebisiinka maka aha ngalaba na ụlọ ọrụ CompanyHub nyere site na Ọrụ na echekwara na CompanyHub. Enwetaghị ikike, mmeputakwa, inyeghachi aha, nnyefe na / ma ọ bụ ịmekọrịta ozi ọ bụla dị na Ụlọ ọrụ CompanyHub n'ụzọ ọ bụla ọzọ, ma n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akụkụ ya, na-amachibidoro iwu, na-emezighị arụ ọrụ iwu megidere gị.
Ị ga-ejigide ikike niile, aha na mmasị na data nke ị tinyere n'ime ụlọ ọrụ CompanyHub. Ị ga-ejidekwa ikikere, aha na mmasị na nyocha na akụkọ sitere na iji ngwa CompanyHub.
Ihe nzuzo niile, ozi nzuzo ma ọ bụ nkeonwe enyere anyị, ma ọ bụ nweta site na nyocha mbụ nke ozi-e ga-edebe nzuzo mgbe niile dị ka enyere na Nzuzo Nzuzo anyị. All feedbacks, azịza, ajụjụ, ihe, aro, echiche ma ọ bụ ihe ndị dị, nke ị na-ezitere anyị ga-emeso dị ka onye na-abụghị nzuzo na-abụghị ihe.
CompanyHub agba mbọ iji kpuchido nzuzo na nzuzo nke ozi nkeonwe ya nke nwere ike ịrịọ ma nata n'aka gị. Iji gụọ nkwupụta iwu nzuzo anyị gbasara ozi gbasara onwe ahụ, biko rụtụrụ aka na anyị AMỤMA NZUZO.
CompanyHub na-akọwa ozi mgbe ị nyochachara data ị nyere na data esitere na ozi-e. Ụlọ ọrụ CompanyHub enweghị njikwa maka izi ezi nke ọdịnaya, iguzosi ike n'ezi ihe ma ọ bụ njirimara nke data ị nyere, na ụlọ ọrụ CompanyHub nwere ike ịgụnye amaghị ihe arụmọrụ ma ọ bụ mmepụta ihe odide, ma anyị enweghị nkwa ọ bụla, anyị agaghị enwekwa ike maka mmekọrịta dị otú ahụ, gụnyere na Ụlọ ọrụ CompanyHub nyochaa eziokwu, mma, ma ọ bụ iwu iwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere ikike inweta ikike ọgụgụ isi, ma ọ bụ ihe ọ bụla kpatara ma ọ bụ mmebi.
A na - enye gị ndụmọdụ ugbu a ma dọọ gị aka ná ntị na ọ bụ ozi ọma gị ka anyị na - enweta ozi niile ọ bụla nyere gị, n'enweghị ihe ọ bụla na - eche na ihe ọmụma ahụ na CompanyHub anaghị akwado, ekwenyeghi, ma ọ bụ denye aha na nkwupụta na nyocha nke Onye Mgbasa Ozi / edepụtara ya na CompanyHub.
CompanyHub nwere ikike, na njikwa ya naanị n'enweghị ọrụ ọ bụla, iji meziwanye, ma ọ bụ dozie njehie ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla, n'ime akụkụ nke CompanyHub ngwa.
E nwere ike ịnye njikọ na saịtị Ịntanetị mpụga n'ime ọdịnaya nke ụlọ ọrụ CompanyHub ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ dị ka ihe dị mma nye gị. Ndepụta nke saịtị na-apụtaghị na nkwenye nke saịtị ahụ site n'aka CompanyHub ma ọ bụ ndị mmekọ ya. Mgbe ị pinyere ọkọlọtọ mgbasa ozi, na-akwado njikọ, ma ọ bụ njikọ ndị ọzọ na mpụga na weebụsaịtị ma ọ bụ Ọrụ ndị ọzọ, ihe nchọgharị gị nwere ike redirect gị na windo windo ọhụrụ nke na-akwadoghị ma ọ bụ na-achịkwa CompanyHub. CompanyHub enweghị ọrụ maka ọdịnaya ọ bụla ezitere na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ ma ọ bụ na ọ dịghị ọrụ ọ bụla iji hụ na arụmọrụ ma ọ bụ ịnweta ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ. CompanyHub na ndị mmekọ ya anaghị arụ ọrụ maka ọdịnaya, ọrụ, eziokwu ma ọ bụ nchekwa na teknụzụ nke saịtị ndị a. Anyị debere ikike iji gbanyụọ njikọ ma ọ bụ site na saịtị ndị ọzọ na nke ọ bụla nke Ọrụ anyị, ọ bụ ezie na anyị enweghị ọrụ ime ya.
CompanyHub nwekwara ikikere ịmanye / gbanwee ụkpụrụ nnweta nke Ụlọọrụ CompanyHub, ma ọ bụ maka ego ịnweta, oge, ngwa, ohere mgbochi ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, nke a ga-ezite site n'oge ruo n'oge n'okpuru Usoro ndị a. Ọ bụ ọrụ ndị ọrụ na-ezo aka na Okwu ndị a oge ọ bụla ha na-eji Ọrụ ahụ.
Anyị na-akwado na anyị bụ onye nwe ụlọ ọrụ CompanyHub, ma nwee ikike na ikike inye ikikere maka iji ngwa CompanyHub. Anyị enweghị ikike, nkwa, ịnakwere ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na-egosi na ụlọ ọrụ CompanyHub ga-emezu ihe ndị ị chọrọ maọbụ na ojiji nke ụlọ ọrụ CompanyHub ga-egbochi ma ọ bụ enweghị ntụpọ. Enweghị okwu ọ bụla ma ọ bụ ozi ederede nke anyị nyere site n'aka anyị ga-emepụta akwụkwọ ikike ma ọ bụ n'ụzọ ọbụla na-eme ka anyị nwekwuo ụgwọ, ma Ị gaghị adabere na ozi dị otú ahụ.
Anyị na-agbakwunye akwụkwọ ikike na ụlọ ọrụ CompanyHub anaghị emegide ikike ọ bụla dị ugbu a ma na-akwado India nwebisiinka, ụghalaahia ma ọ bụ patent, na anyị ga-ekweta na inye gị ikikere na-efu ihe gbasara ụgwọ ọ bụla, ụgwọ, mmebi ma ọ bụ mmefu (gụnyere ezi uche ụgwọ ndị akwụ ụgwọ na ụgwọ ụlọikpe) na-esi na nkwupụta ọ bụla, ịrịọ ma ọ bụ mmemme na-ekwu na akwụkwọ ọrụ CompanyHub mebiri ma ọ bụ mebie ikike nwebisiinka, ụghalaahia, patent ma ọ bụ ikike ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi nke onye ọ bụla ọzọ, ị ga-arụkọ ọrụ ọnụ n'ịkwadebe nchebe megide ụdị nkwupụta dị otú ahụ.
Ihe ọ bụla ojiji nke Service, ịdabere na ngwa ụlọ ọrụ CompanyHub, na iji ojiji Ịntanetị n'ozuzu ga-abụ naanị ihe ize ndụ gị. CompanyHub kwụsịrị ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ maka eziokwu, ọdịnaya, izu ezu, iwu, ntụkwasị obi, ma ọ bụ operability ma ọ bụ nnweta ozi ma ọ bụ ihe egosipụtara na nsonaazụ / akụkọ sitere na Ọrụ ahụ.
Ụlọ ọrụ CompanyHub na ọrụ ndị a na-enye na "As Is" na "Dịka E Nwere" nke na-enweghị akwụkwọ ikikere nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụghị dị ka ekwuputara na nke a, ma ọ bụ ekwupụta ma ọ bụ ihe atụ ma ọ bụ iwu, tinyere, ma ọ bụghị njedebe, nke ahịa, ahụike maka otu nzube, ma ọ bụ enweghị mmebi iwu. CompanyHub kwusara, ruo n'ókè zuru oke nke enyere n'iwu, ikike ọ bụla gbasara nchebe, ịdabere, nzi ezi na arụmọrụ nke ngwa ụlọ ọrụ na ọrụ. CompanyHub adịghị akwado na ọ bụla ntụpọ ma ọ bụ njehie ga-edozi ma ọ bụ na ọdịnaya enwereghị nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. CompanyHub kwetakwara ikikere niile na ikikere niile dịka iwu nyere n'iwu gbasara ozi ọ bụla, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ, nwetara site, mgbasa ozi ma ọ bụ natara site na njikọ ọ bụla site na ọrụ.
Ụlọ ọrụ CompanyHub adịghị ebu iwu ọ bụla ma ọ bụ ibu ọrụ maka ịzi ezi, izu ezu, ma ọ bụ uru nke akụkọ ọ bụla, nyocha ma ọ bụ ọrụ enyere site na ụlọ ọrụ CompanyHub. O nweghị ihe ga - eme ka CompanyHub bụrụ onye nwere ike ịdabere na gị, n'ihi njiri gị, iji ya eme ihe ma ọ bụ ịdabere na ngwa CompanyHub ma ọ bụ iji (ma ọ bụ enweghị ike iji), ịdabere ma ọ bụ ịrụ ọrụ nke ọrụ ọ bụla, maka ihe ọ bụla mebiri, gụnyere kpọmkwem, pụrụ iche , ntaramahụhụ, nkwụsị, njedebe ma ọ bụ mbibi ọ bụla ma ọ bụ mbibi maka uru efu, ego ha nwetara, eji, ma ọ bụ data, ma ọ bụ wetara akwụkwọ ikike, nkwekọrịta, imebi iwu nke ụlọ akụ, mmebi (gụnyere ileghara anya) ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụrụ na CompanyHub maara ma ọ bụ ka a dụọ gị ọdụ na ọ ga-ekwe omume na mmebi ahụ dị na ma ọ bụ ejikọrọ na iji (ma ọ bụ enweghị ike iji) ma ọ bụ arụmọrụ nke ngwa CompanyHub ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Iwere ọrụ niile na ihe ize ndụ maka iji Ụlọ ọrụ CompanyHub na ọrụ ahụ. Amaghị oke nke a ga-emetụta n'agbanyeghị nkwụsị ọ bụla nke nzube dị mkpa nke ngwọta ọ bụla a ga-ejedebe na ruo n'ókè zuru ezu kwere na iwu iwu. Ọ bụrụ na a kwenyere na mwepu ma ọ bụ njedebe nke ọrụ nke ọdachi ma ọ bụ ihe ọghọm dị na ya adịghị akwado ya, n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ụgwọ ahụ ga-ejedebe na iwu kachasị mma.
Ị kwenyere na inye anyị ikike na ijide anyị, ndị isi anyị, ndị nduzi anyị, ndị ọrụ anyị, na ndị ọrụ anyị, na-adịghị emerụ ahụ site na nkwanye ma ọ̄ bụ arịrịọ ọ bụla, gụnyere ụgwọ iwu nke ndị ọka iwu ọ bụla, nke ọ bụla nke ọzọ mere ma ọ bụ na-esite na mmebi iwu gị, nke iwu ọ bụla, ma ọ bụ mmebi nke ikike nke ndị ọzọ, gụnyere ịda iwu nke gị ma ọ bụ ikike ọ bụla nke onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
okwu - Usoro ndị a ga-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke ma rụpụta ruo oge ahụ ka ị nọgide na-eji ngwa CompanyHub ma ọ bụ ọrụ ọ bụla metụtara ya.
Severability - Ọ bụrụ na ihe ọ bụla mere ụlọikpe nke ikike nwere ikike ji nweta ndokwa ma ọ bụ akụkụ nke Okwu ndị a iji bụrụ ndị a na-apụghị imeri emeli, ihe fọdụrụnụ nke Okwu ahụ ga-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke ma nwee mmetụta.
dum Agreement - Okwu ndị a bụ nkwekọrịta zuru oke n'etiti anyị na ndị ọzọ ma dochie nghọta ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla ma ọ bụ nke dị na mbụ, ma ọ bụ okwu ọnụ, banyere okwu gbasara Okwu ndị a. Ịnọgide na-eji Ọrụ ahụ ga-abụ ihe ngosipụta zuru oke nke nnwere onwe gị dị ka nnwere onwe ọ bụla anyị mere na Usoro ndị a.
Waiver - Ntufu ọ bụla nke Okwu ndị a ga-adị irè naanị ma ọ bụrụ na edere ma bịanye aka na CompanyHub.
Ọrụ - Ịnwere ike ịnyeghị ikike ma ọ bụ ọrụ gị n'okpuru Usoro ndị a na-enweghị nkwenye a kwupụtara ederede n'aka anyị. CompanyHub nwere ike itinye ọrụ / ọrụ na ikike ya n'okpuru Usoro ndị a n'ebughị ụzọ chọọ nkwenye ọ bụla n'aka gị.
Ntughari - Ihe niile anyị ga-ahụ, ihe ndị anyị chọrọ na nkwukọrịta ndị ọzọ ga - edere ma a ga - ewere ya na e nyere (a) ma ọ bụrụ na ezigara site na mail e debara aha, ụgwọ ọrụ ịkwụ ụgwọ, (b) ọ bụrụ na onye ozi na - nnyefe na nnyefe dị otú ahụ ka ekwenyela dịka e natara, ma ọ bụ (d) ma ọ bụrụ na e zigara ya ozi eletrọnị, yana ozi dị otú a dị ka ọ natara, na nke ọ bụla na adres, nọmba faksị ma ọ bụ adreesị ozi-e kpọmkwem na Websaịtị. Ihe niile ị na-ahụ, ihe ndị ị chọrọ na nkwukọrịta ndị ọzọ ga-adị na ederede ma a ga-ewere ya na e nyere (a) ma ọ bụrụ na e zigara ya akwụkwọ ozi, ma ọ bụrụ na onye ozi ezigara ya, na adreesị anyị: CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd., Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, India - 422101
Ike ka ike - Ọ dịghị ihe ọ bụla ga - eme ka anyị bụrụ ndị kwesiri ikpebi ma ọ bụ bụrụ ndị a ga - ewere na ọ bụ mmebi iwu maka ọdịda ọ bụla ma ọ bụ igbu oge arụmọrụ sitere na ọrụ ọ bụla, ọkụ, idei mmiri, nbili, ala ọma jijiji, ihe mgbochi (ma ọ bụ iwu ma ọ bụ iwu na-akwadoghị), arụ ọrụ egwu, ọrụ ma ọ bụ ụkọ ihe onwunwe, mmebi nke njem ọ bụla ma ọ bụ ọrụ slowdown ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla adịghị adabere n'ụzọ ziri ezi na anyị.
Ikpe ikpe - Ọ bụla esemokwu na esemokwu dị iche iche na-ebili n'ihe metụtara Okwu ndị a ga-ekpebi site n'ikpe nchịkwa dịka iwu nkwụsị na nkwekọrịta, 1996. A ga-eme ihe niile n'asụsụ Bekee. Ọ gwụla ma ndị otu na-ekwenye na otu onye na-ekpechite ọnụ na ndị mmadụ ga-enwe ndị nnọchiteanya atọ, onye ọ bụla ga - ahọrọ, na ndị nke atọ ga - ahọrọ ndị Arbitrators abụọ ahụ ahọpụtara. Ebe mgbakwasị ụkwụ ga-abụ na Nasik, India. Onu ogugu nke onye na-achikota aka ga-abia ma kwado ya.
Iwu Iwu - Okwu ndị a ga-achịkwa ma kọwaa dịka iwu ndị India si dị ma kwenye na ị ga-edo onwe ha n'okpuru ikike nke ụlọikpe dị na Nasik. Ị ga-ahụ maka ịkwado iwu ndị metụtara. CompanyHub nwere ikike ịchọta ọgwụ niile dị na iwu na nha anya maka imebi okwu ndị a.
Kpọtụrụ na Ọrụ Ịmara - Biko kpọtụrụ anyị na ajụjụ ọ bụla gbasara Usoro ndị a. Biko kọọ akụkọ ọ bụla iberibe Okwu ahụ nkwado@companyhub.com.
ACKNOWLEDGMENT - Ị BỤRỤ NA Ị GỤRỤ NA GỊ KWESỊRỊ ỤTỌ NDỊ A. Ị KWESỊRỊ IHE NDỊ ỌHỤRỤ NKE NA-AHỤ NWA NA NTỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE NA NTỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE, NA-EBE ECHICHE MA NTỤKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ DỊ N'ỤLỌ NCHE A.